ဘာကြောင့် ဒီလောက် မြန်ရတာလဲ:? — MYSTERY ZILLION
347 Mobile Devlopment
106 other mobile
ဘာကြောင့် ဒီလောက် မြန်ရတာလဲ:?
June 2012 edited June 2012 in MZ News
ဘာကြောင့် ဒီလောက် မြန်ရတာလဲ:?
မေးချင် နေတာကြာပါပြီ။ တခြား သူတွေတော့မသိပါဘူး။ mysteryzillion.org ရဲ့ page load time ဟာ ကျွှန်တော့မှာ Firefox နဲ့ ဆို 1 second ပဲ့ကြာပါတယ်။ ဘယ်လိုမျို: နည်းလမ်း တွေသုံးထားလဲ: သိချင်ပါတယ်။ ကျွှန်တော့Wordpress.org Blog မှာ Firefox နဲ့ဆိုရင်5seconds ကြာပါတယ်။
(( MZ ရဲ့ admin ကြီးများခင်ဗျား MZ ကိုတစ်ခါဝင် လျှင် E mail တစ်ခုပေး နေရပါတယ်။ ဒီအခုဝင်တဲ့ Email က လေးခုမြောက် Email ပါခင် ဗျား။ ပြီးတော့ (မေးမြန်းဆွေးနွေးမှု့စတင်ရန်) ကို click လျှင် Post dashboard က login ဝင်မထား လဲ: ပေါ်လာပါတယ်။))
mz မှာ design တစ်ခုလုံးကို css နဲ့ပဲ ဖန်တီးထားပါတယ်။ image တွေကို တတ်နိုင်သလောက် လျော့ချထားတယ်။ image loading ထက်စာရင် css loading က ပိုမြန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်ပါတယ်။
image တွေကို နည်းနည်းပဲသုံးပြီး design ကို css နဲ့ အဓိက သုံးရင် ပိုမြန်ပါမယ်။
Email တစ်ခါဝင် တစ်ခုပေးစရာမလိုပါဘူး။ login ဝင်လို့မရတဲ့ အခါ ဘာ error ပြပါသလဲ ?
သိပ်မြန်တယ် ကြိုက်သွားပြီ။ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကလဲ ရှင်းလင်းပြီး quality QA တွေ။
Response header မှာ cloudflare-nginx ပါပြီး power by PHP/5.3.6-13ubuntu3.6 လို့ဆိုသဗျ။ HTTP cache control တော့မပါဘူး။ cloudflare ကတော့ cache လုပ်ပြီး မြန်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ DNS proxy server ပါ။ အရမ်း hot နေတဲ့ modern နည်းတွေပေါ့။
comments data တွေကိုတော့ jquery ajax နဲ့ နောက်မှ ဆွဲယူပုံရပါတယ်။ PHP server မှာ HTML render လုပ်တုန်း အချိုင်ကြာမယ့် database lookup ကို ရှောင်တဲ့ သဘော်ပါ။
ဘာကြောင့် မြန်သလဲ့ ဆက်ဆွေးကြအောင်။
cloudflare နဲ့ ခံထားပြီး server ကိုတော့ Ningx သုံးထားပါတယ်။
Nginx က Apache ထက်စာရင် ပိုမြန်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် Server က memory နည်းတဲ့အတွက် Ngnix ရဲ့ power အပြည့် မသုံးနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် php-fpm process ၂ ခုပဲ တပြိုင်တည်း run ထားပါတယ်။
အများအားဖြင့် recommend လုပ်တာက4ခု ပေမယ့် 512 MB memory မှာ အဲလောက်ထိ တင်လိုက်ရင် memory က အဲလောက် မထိန်းနိုင်လို့ ပြန်လျော့ချထားရပါတယ်။
Server ကတော့ http://www.linode.com/ မှာ တင်ထားပါတယ်။ Linode 512 ကိုပဲ ယူထားပါတယ်။
website ကိုတော့ vanilla သုံးထားတယ်။ vanilla ကိုတိုင်က မြန်တာလည်း ပါပါတယ်။
vanilla template ကိုတော့ ကိုယ်တိုင် ပြန်ရေးထားတာပါ။ design တစ်ခုလုံးကို image အနည်းဆုံး ဖြစ်အောင် ရေးသားထားပါတယ်။
CSS3ကို အဓိက ထားပြီး သုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့် လက်ရှိ modern browser တွေမှာ အဆင်ပြေပြေနဲ့ မြန်မြန် အသုံးပြုနိုင်တာပါ။
HTTP cache control ကတော့ မထည့်ထားပါဘူး။ အဲဒီ အပိုင်းလေး ကျွန်တော် မသိလိုက်တာကြောင့် ကျန်သွားခဲ့တယ်ဆို ပိုမှန်ပါတယ်။
ကျေးဇူးဗျာ။ အများကြီး ပညာရပါတယ်။
static files တွေ အကုန်လုံး cache လုပ်လို့ရပါတယ်။ လုပ်စရိုးလုပ်စဉ်ကတော့ YDN မှာ (http://developer.yahoo.com/performance/rules.html) ဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်း static files တွေကို အခြား static server (preferably CDN) ကနေ တင်လွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Jquery library ကို public cache ရအောင် Google CDN (https://developers.google.com/speed/libraries/) ကနေ ဆွဲယူရပါမယ်။ public cache ဟာ user browser မှာတင် cache လုပ်ရုံမဟုတ်ပဲ router တွေမှာလဲ cache လုပ်ပါတယ်။ ဥပမာ မြန်မာပြည်က request ဆို ရင် တစ်ယောက်က ဆွဲပြီးရင် cache max-age မရောက်မခြင်း တပြည်လုံး သုံးနိူင်ပါတယ်။ public cache တွေဟာ max-age ကိုလဲ များများ ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ jquery တို့ဆိုရင် url မှာ version ပါတာမို့ နဲ့ ပြောင်းလဲစရာ မရှိပါဘူး။ Google ရဲ့ https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.1/jquery.min.js မှာ cache-control:public, max-age=31536000 လို့ ပါပါတယ်။ တစ်နှစ်တောင် cache သိမ်ခိုင်းထားပါတယ်။
webkit brower developer console မှာ audit သုံးပြီး suggestion တွေကို ကြည့်နိူင်ပါတယ်။
http://mmwebfonts.comquas.com/fonts/?font=myanmar3 က တခါခါ အလွင်နှေးတာ တွေ့ရပါတယ်။ Google လုပ်သလို cache-control:public, max-age=31536000 ထဲ့ပေးလိုက်ရင် မြန်သွားပြီး ကိုစေတန်လဲ bandwidth ခတွေ တော်တော် သက်သာသွားပါလိပ်မယ်။
MZ account လုပ်ထားရင် Email မှမဟုတ်ပါဘူး။ Username မှတ်မိနေရင်လည်း Username ကိုအသုံး﻿ပြုပြီး ဝင်လို့ရပါတယ်။
ကျွန်တော့် အကောင့်က ဟိုးအရင် vBulletin ကတည်းက ရှိတာဆိုတော့ အခုနောက်ပိုင်း Vanilla ပြောင်းပြီး account activation လိုမလိုတော့ မပြောတတ်တော့ဘူး။
ကို @kyawtuns , ကျေးဇူးပါပဲ။ ကျွန်တော် ထည့်လိုက်ပါမယ်။
@K ပြောမှပဲ မှတ်မိတော့တယ်။ ကျွန်တော်က facebook နဲ့ ချိတ်ထားတော့ facebook icon နှိပ်ပြီးပဲ ဝင်ဝင်နေတော့ username နဲ့ password ဝင်ရတယ်ဆိုတာတောင် မေ့သွားတယ်။
ကောင်းရောဗျာ။ ဟားဟား။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာတော့ Facebook ထက်စာရင် Default Login က ပိုအဆင်ပြေတယ်လေ။ တော်သေးတာပေါ့။ Username က အရှည်ကြီးမဟုတ်လို့။
ဘာပဲပြောပြော vBulletin တုန်းကလောက် Discussion တွေ မရှိတော့ပေမယ့် Vanilla နဲ့လည်း MZ က အဆင်ပြေနေတုန်းပါပဲ။
All Hail HTML+CSS !
တစ်ခြားလူတွေတော့မသိဘူး။ ကျွန်တော့်ဆီမှာတော့ MZ မှာရေးထားတဲ့ Comment တွေ Preview လုပ်ရင်အဲဒိလိုပေါ်ပြီး Page ကဟမ်းနေတယ်။ ဘာမှလည်းလုပ်လို့မရဘူး။ ဒီရက်ပိုင်းမှဖြစ်နေတာ။ ခဏခဏပဲ။ Comment ရေးနေတုန်းလဲမကြာခဏဆိုသလိုပေါ်လာတက်တယ်။ Why?
Can you clean the cache and try again ?
What version of firefox are you using ? I am using Firefox 13 and it's OK.
ကျွန်တော်လည်း version 13 ပါပဲ။ ဒီရက်ပိုင်းတော့မဖြစ်တော့ဘူး။ ကျေးဇူးပါပဲ။